Sirdoonka liita ee federaalka iyo sareynta mujaahidiinta – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Sirdoonka liita ee federaalka iyo sareynta mujaahidiinta
Last updated Jul 20, 2018 201 0
Magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka dhaca qaraxyo iyo dilal rasaas loo adeegsado kuwaasoo ay fuliso xarakada mujaahidiinta alshaab.
dad badan oo shisheeyaha iyo kaaliyaashiisa ka kooban ayaa hurdada ka salala marka daaqaduhu dhawaaqaan iyagoo u qaata in loo soo dusay oo in qoorta laga gooyo ama rasaas lagu shaq shaqo keliya harsan tahay.
Raga qaar caruurtii u dhalatay iyagoo hotel degan ayaa iminka jira toban sano ama in ka badan ilaa intaasna waxay waxay ku noolayeen walaac iyo walba baar.
Waxay og yihiin dakanada ay ka galeen diinta, dalka iyo dadka sidaa aawgeed waxaan shaki uga jirin in aan la dhaafeyn oo kurka laga jarayo haddii mujaahidiintu fursad ku helaan.
Madaxda dowladda federaalka ah iyo shisheeyaha ay u adeegaan hadba waxay dejiyaan qorshayaal ama dhagaro ay ku doonayaan in ay ku wiiqaan awoodda mujaahidiinta laakiin hadba wixii la isku af gartay ama lagu dhaqaaqay ayaa noqda hal bacaad lagu lisay.
Sebtigii la soo dhaafay iyo kii kale e ka horeeyay muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo iyo weeraro xarakada shabaabul mujaahidiin la beegsatay meelo hal bowle ah waxaana dowladda federalku ku weysay askar iyo saraakiil muhiim u ahaa.
Weerarkii hore waa uu ka dhacay xarunta baliiska ee oto oto oo sidoo kale ay degan yihiin wasaaradaha aniga iyo arimaha gudaha.
kan labaad waxa uu ka dhacay illinka madaxtooyada waxyar kadib markii madaxweynaha federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo oo dalka biljimka u dhoofayay halkaas ka gudbay.
Shisheeye kalkaalku waxay waxay gaareen heer ay iyagu is tuhmaan ayna aaminaan in qaarkood xariir shaqo la leeyihiin mujaahidiinta taasuna waxay sii kordhisay cabsida ay ay qabaan iyo in mid waliba kan kale uu ka shakiyo.
Cabdiramxaan cabdishakuur oo horay isugu soo taagay xilka madaxweynaha federaalka hadana ah gudoomiyaha xisbi mucaarad ah ayaa keenay su’aal la xariirta sida ay suura gal ku tahay in ragii weerarya wasaaraha amniga iyo gudaha uga gudbeen jidgooyooyinka faraha badan ee magaaalada la dhigay ciidamaduna dhooban yihiin?
Dadka ku dhaqan muqdisho waxaa la geliyay cariiri xad dhaaf ah maadaama xattaa jidcadyaashii laga xiray laami warkii daaye.
Weerarada aan hakaneyn wadooyinki oo xiran waxay fursad u noqdeen qolyaha dhaliila siyaasadda xubnaha iminka xilalka haya.
Wasiirka amniga maxamed abuukar isloow oo asigoo ka baqaya in seefta xil ka qaadistu la tagto shaqada ka joojiyay saraakiil iyo askar badan xabsigana u dhaadhiciyayn ayaa fagaare isla soo taagay war loo arkay nin daad qaday xubo cuskay.
Wuxuu sheegay in alshabab dhegta wax ugu sheegeen dadka dhaliilaya jidadka xiran.
Ka sokow qaraxyada mujaahidiintu waxay caasimadda ku dileen shisheeye kal kala badan
Federalaku waxay marar badan ku andacoodeen in ay yareen qaraxyada laakiin cabdiramxaan cabdi-shakuur ayaa qaba in aanay xarakada mujaahidinta alshabaab qaraxyada aad u daneyneyn haddayba u suura galeyso inciddii ay rabaan in ay ku tooog toogtaan gudaha magaalada.
Iyadoo ku dhawaad todobaad laga joogo weerarkaas dowladda federaalku waxay ku kacday ficilo muujinaya cabsi middii ugu heer sareysay.
Awal markii madaxweynaaha ama ra’iisalwasaaaruhu dhooofayaan ama soo degayaan ama xaflad tegayaan jidadka in loo xiro ciidamana lagu daadiyo ayay xaajadu ku ekaa jirtay laakiin 19 07 2018 ciidamada qaar ayaa lagu amray in ay guryaha dabakhyada ah ee shacabku degan yihiin kuna yaalla deegaano caasimadda ka tirsan xoog ku koraan si ay halkaa uga ilaaliyaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo dalka dib ugu soo noqday.
Deegaanka ceel gaabta ee degmada xamar jajab ayaa ka mid ahaa meelaha guryaha ku yaal ciidamo qoryaha keebka uga yuurara fuuleen.
Weeraradii u damabeeyya kadib kasow saraakiisha la xir xiray taliyaha sirdoonka oo u muuqda in madaxweynaha uu fasax aaa amar ka haysto ayaa shaqada ka joojiyay labadiisi ku xigeen.
Ismaaciil cismaan oo horay u soo noqday taliye xigenka nabad sugidd aaya sheegaya in loo baahnaa tilaabooyin intaa ka xoogan oo ay ahayd in dadka qaar arintaan xililkooda ku waayaan.
Ismaaciil cismaan waxa uu qabaa in shaqada hay’adda naabd sugidda la marin habaabiyay oo ciidamadii xogta ama macluumaadka dooni lahaa laga dhigay kuwa hubeysan oo sida malateri u howl gala taasina meesha ka saareyso macluumaadkii la heli lahaa.
Dowladda federalaak ah waxaaa ku adeegta shisheeye maraykanku ka mid yahay.
Hay’adda sirdoonku waxay ku milintay sirdoonada maraykanka iyo kuwa wadamada kale ee soomaaliya sida tooska ah ama sida dadban u gumeysta
Maraykanku wuxuu maal geliya hay’adda sirdoonka iyo nabad sugidda federaalka wixii xog ah ee gacanteeda ku soo dhacana asiga ayay u gudbisaa halkii madaxweynaha iyo wixii la mid ah ay la wadaagi lahaydd inkastoo madaxweynaha qudhiisu yahay ninka koowaad ee shisheeyaha u adeegaya.
Taliyihii hore ee nabad sugidda cabdulaahi maxamed cali (sanbaloolshe) wuxuu sheegayaa in aanay jirin haba yaraatee wax sir ah oo dowladda federaalaka h u qarsoon.
Xubnaha sirdoonka iyo nabad sugidda waxaa ku jira kuwa aan qaadka iyo maandooriyaha kale cunin waxayna ka duwan yihiin inta badan ciidamada dowladda sababtoo ah maryakanka ayaa raba in ay waqti badan soo jeedi karaan xiskooduna u noqdo mid fayow si loogu adeegto oo loogu dan gaaro, laakiin lama siiyo tababar heerkiisu aad u sareeyo oo ay kula loolami karaan sirdoonada dhigooda ah.
Ciidamo badan oo shisheeye ayaa wadanka duulaan ku jooga federaalka iyo maamul gobaleedyaduna waxay leeyihiin ciidamo tiro badan laakiin allaah mahaddii mujaahidiinta ayaa u babac dhigay dhul badan oo koofurta iyo bartmaah soomaaliya ka tirsan ayaana lagu maamulaa shareecada islaamka.
Muslim iyo gaalba waxay isku waafqsan yihiin in xarakada mujaahidiinta alshabaab ka sirdoonkeedu ka heer sareeyo dowladda federaalka ah waxaana dadka arintaas qaba ka mid ah taliye xigeenkii hore ee sirdoonka iyo nabad sugidda ismaaciil cismaan
Halkaan ka dhegeyso warbixinta sirdoonka liita ee federaalka iyo sareynta mujaahidiinta